Riot Bridge ဖလှယ်မှုအသွားအလာစတင်ခဲ့ - RayHaber
Homeတူရကီအရှေ့တောင် Anatolia ဒေသကြီး63 Sanliurfaအဓိကရုဏ်း Interchange ယာဉ်အသွားအလာမှဖွင့်လှစ်
16 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 63 Sanliurfa, အရှေ့တောင် Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
Sanliurfa အသွားအလာလမ်းဆုံ၏သဘောသဘာဝ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာအဓိကရုဏ်းKöprülügအသွားအလာမှဖွင့်လှစ်။ Şanlıurfaမြို့တော်ဝန် Zeynel တူနီးရှားတွင်Beyazgülအစပျိုးအသွားအလာချိန်းတွေ့ကြကြောင်းအဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းရေးလမ်းဆုံလမ်းဆုံနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်ရရှိခဲ့
အဝေးပြေးလမ်းမကြီး9။ ထိုအခါတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ Sanliurfa ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုအဆိုပါယာဉ်ကြောစီးဆင်းမှုနှင့်အတူလမ်းဆုံမှာလမ်း asphalting အပေါ်အဓိကရုဏ်းရဲ့အထူးကြပ်မတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့အဖွဲ့သည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
တူရကီမှBeyazgül၏ခရီးစဉ်အတွက်စတင်အစပျိုး၏ရလဒ်အဖြစ်အဓိကရုဏ်းလမ်းဆုံလမ်းဆုံများတွင်မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Zeynel တူနီးရှားတွင်လေ့လာမှုများမကြာသေးမီကအရှိန်သိရသည်။ မကြာသေးမီရက်အတွင်းကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဒီလအသွားအလာမှဖွင့်လှစ်လမ်းသတငျးကောငျး ပေး. , Beyazgülနိုင်ငံတော်သမ္မတတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒုဥက္ကဋ္ဌ Canbeyli ဆင်ဟွာ "ကျနော်တို့ယာဉ်သွားလာမှုအဓိကရုဏ်း Junction AS ၏AÇTIKပေးပါ"
ကျွန်တော်ယခင်ကကျောင်းဖွင့်ပွဲနှင့် တွဲဖက်. ပေးထားဆွေးနွေးတင်ပြကြသည့်အတိုင်းလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ Cihan Canbeyli နှင့်အတူနည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့်ကန်ထရိုက်တာအရာရှိများ၏လယ်ပြင်တွင်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး "စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှာတွေ့ရှိ, ကြှနျုပျတို့အဓိကရုဏ်းလမ်းဆုံဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများနှင့်ကန်ထရိုက်တာတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကြိုးစားမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ဤနေ့ဤရက်ပတ်လုံးမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Zeynel တူနီးရှားတွင်Beyazgülကျနော်တို့လမ်းကိုဦးဆောင်ကြပါပြီ။ မျှော်လင့်ကျနော်တို့လမ်းမှပြန်လာကြလိမ့်မည်Şanlıurfalılardanပိုကောင်းရဖို့, လာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌ယာဉ်ကြောမှဖွင့်လှစ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, traffic ကိုမှဖွင့်လှစ်သောလမ်းသည်ယခင်ကစီမံကိန်းများအဖြစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှု, မလြော့ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ရရှိခဲ့သည်။
အဓိကရုဏ်း Interchange အတွက် Start မှလုပ်ငန်းခွင်လမ်းခင်း 03 / 09 / 2019 Şanlıurfaမြို့တော်ဝန် Zeynel တူနီးရှားတွင်Beyazgül Sanliurfa အသွားအလာ၏စိတ်နှလုံးမှာအဓိကရုဏ်းKöprülügလမ်းဆုံ၏အရေးပါမှုနှင့်သဘောသဘာဝအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အလုပ်ကတ္တရာမှစတင်ခဲ့သည်။ တူရကီမှBeyazgül၏ခရီးစဉ်အတွက်စတင်အစပျိုး၏ရလဒ်အဖြစ်အဓိကရုဏ်းလမ်းဆုံလမ်းဆုံများတွင်မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Zeynel တူနီးရှားတွင်လေ့လာမှုများမကြာသေးမီကအရှိန်သိရသည်။ အဆိုပါယာဉ်ကြောBeyazgülနိုင်ငံတော်သမ္မတ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာဒေသတွင်း၌တိကျစွာအနေအထားနှင့်အတူအလုပ်ကိုလိုက်နာသူကို Sanliurfa ငါခင်းအလုပ်စတင်ရန်အကျိုးရှိသောဖြစ်လိုပါသည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး9။ Şanlıurfaတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်အဓိကရုဏ်းလမ်းဆုံများ၏ tarring အပေါ်အထူးကြပ်မတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်လာမယ့်ကာလ၌အသင်း၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုပြီးစီးလိမ့်မည်။ အဓိကရုဏ်း Interchange အပေါ်ကတ္တရာအလုပ်; အဝေးပြေးလမ်းမကြီး9... ။
drivers ထောက်ခံမှု Mota မှာတွေ့ရှိကြသည်အဓိကရုဏ်းသွားရောက်ကြည့်ရှု 15 / 12 / 2016 Mota ယာဉ်မောင်းအဓိကရုဏ်းမှထောက်ခံမှုသွားရောက်လည်ပတ်မှာတွေ့ရှိကြသည်: ကျွန်ုပ်တို့၏ဒရိုင်ဘာ, အ Malatya အောက်တွင် '' ငါသည်သင်တို့ကိုငါလေရဲတပ်ဖွဲ့ 'ရဲအဖွဲ့ဝင်များလွန်ကျူးတိုက်ခိုက်မှုသွားရောက်လည်ပတ်ဘို့အစ္စတန်ဘူလ် Besiktas နေရာယူသောအဓိကရုဏ်းရဲတပ်ဖွဲ့ Mota ကားမောင်းသူဟာသူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သူရဲအရာရှိများ၏ဝမ်းနည်းကြောင်းကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်းအဆိုပါယာဉ်မောင်း၏ခံစားခကျြဖော်ပြ၎င်းတို့၏နာကျင်မှုသည်ကြီးကသူရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့်စည်းလုံးမှု၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုပေး၏တပ်တွေနေ့စဉ်အသက်တာ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌နက်ရှိုင်းသောအမာရွတ်များကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ "ဒီနေ့နေ့ကဖြစ်ပါတယ်" ဟုအဆိုပါယာဉ်မောင်းသူတို့အားလုံးအဖွဲ့အစည်းများ coalesce နှင့်လိုအပ်မျဉ်းသားအဖြစ်သစ္စာပျက်သောဆန့်ကျင်နိုင်ငံ၏ရပ်တည်ချက်ကပြောသည်။ သူတို့တစ်တွေသူနာပြုစောင့်လူမှုရေးမီဒီယာများ၏ Besiktas သစ္စာပျက်သောခံစားချက်များကိုအတွက်ရဲများကတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ဒဏ်ရာရသူကုသ ...
Interchange ၏ထက်ဝက်ယာဉ်အသွားအလာမှဖွင့်လှစ် 09 / 10 / 2014 Interchange ယာဉ်အသွားအလာ၏တစ်ဝက်ဖွင့်လှစ်: စတင်နေပြီအလုပ်အပေါ်ပြီးစီးခဲ့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထားကြွေရိပ်သာလမ်း Interchange ၏ထက်ဝက်။ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, D-100 ၏ဆိပ်ကမ်းကနေကားဖြင့်ဝက်လမ်းလမ်းဆုံ၏ကျမ်းပိုဒ်ဆက်သွယ်မှုများကိုခွင့်ပြုပေါငျးကူး။ စက်မှုအဆောက်အဦနှင့်ဆိပ်ကမ်းများ၏ကိရိယာများ, D-100 လမ်းနှင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည့် TEM အဝေးပြေးလမ်းမကြီးလမ်းဆုံမှ connection ကိုအတွေ့အကြုံတံတားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။ ဆိပ်ကမ်းထည့်သွင်းမှုနှင့် OUTPUT ကားလမ်းလမ်းဆုံ Interchange အစ္စတန်ဘူလ်ကနေအင်္ဂါရပ် 500 မီတာဆီသို့ဦးတည် xnumxxxnumx လမ်းကြောင်းအတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့ကြပင်လယ်ကွေ့ဆိပ်ကမ်းများ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပေါ့အပိုဆောင်းအသွားအလာဝန် enabled ။ အဆိုပါလမ်းဆုံမှာ2မီတာရှည်လျား xnumxxxnumx အဆိုပါတိုးချဲ့လမ်းသွားလမ်း D-shaped ကြွေရိပ်သာလမ်း 1 လမ်း ...
Kestel Interchange အသွားအလာအခမ်းအနား (- ဓာတ်ပုံပြခန်းဗီဒီယို) မှဖွင့်လှစ် 04 / 03 / 2014 ရထားလမ်းအကူးအပြောင်းအဖြစ်လမ်းမပေါ်တွင်အဖြစ်ကောင်းစွာ -Izmir အများသုံးနေဖြင့်တူရကီ၏ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကိုလည်းခွင့်ပြုနိုင်ရန်အတွက် built Kestel အဆိုပါလမ်းဆုံ node ကိုနှင့်အတူအခြားအရေးကြီးသောအသွားအလာဖြေရှင်းခဲ့သည်: Kestel Interchange အသွားအလာအခမ်းအနားမှဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါ Keszthely ပြီးနောက် breathable လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Gürsu, အလုပ်သမားများနှင့် ESENEVLER Özlüce- Alaattinbey လမ်းဆုံနှင့်အတူအလုပ်ခွံ့ပြုသည်အသစ်အလမ်းများနှင့်လမ်း၏အကြောင်းကို 540 ကီလိုမီတာတစ်ဦးကကာလကိုလည်းအခမ်းအနားမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါမြို့တော်မြူနီစီပယ်, ပင်လယ်နှင့်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှအနီးကပ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘတ်ဂျက်၏ 70 ရာခိုင်နှုန်းကိုခြားနားစေသော Bursa သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများ, မြို့သားအပေါင်းတို့ဒေသများရှိလက်လှမ်းဖြစ်နိုင်ရန်အတွက် ...
1 ၏ Suleyman Demirel Interchange ။ ဇာတ်စင်ယာဉ်အသွားအလာမှဖွင့်လှစ် 23 / 11 / 2018 အဝေးပြေးလမ်းမကြီးလမ်းဆုံစီမံကိန်းကိုအပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးစတင် Izmir ၏Alaşehir Manisa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့် Denizli 1 အားဖြင့်အသွားအလာစီးဆင်းမှုသက်သာရာနိုင်ရန်အတွက်နိုင်ငံသားများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လုံခြုံရေးအာမခံပါသည်။ Edit ကိုအဆင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါခေတ်မီအဝိုင်းတွင်သူကျေးဇူးတင်စရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပြင်ငါတို့သည် output ကို၏အသေခံသောအဘို့ကို၏လမ်းမပေါ်တွင်စတင်ခဲ့အသွားအလာလမ်းဆုံစီမံကိန်းများကိုမှဖွင့်လှစ်ကြသည်ယနေ့နစ်မြုပ်သောကြောင့်နိုင်ငံသားများအများအပြားအသက်ဆုံးရှုံးအတိတ်ထဲမှာ "Manisa မြို့တော်ဝန် Cengiz Ergun သောပထမဦးဆုံးအကူးအပြောင်းယူပါ။ ရှိသမျှတို့ကိုငါဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်, တကဘေးကင်းလုံခြုံရာအရပ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ခေတ်မီလမ်းဆုံ၏ဆိုးအမှတ်တရများချန်ထားမည်မျှော်လင့်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။ Izmir နှင့် Denizli ၏နိုင်ငံသားများ၏ဘဝအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးစတင်ခဲ့သည်Alaşehir drive ကိုတစ်အိပ်မက်ဆိုးဖြစ်လာနှင့်အန္တရာယ်အတွက်ထားသည့် Manisa မြူနီစီပယ် ...
1 ၏ Suleyman Demirel Interchange ။ ဇာတ်စင်ယာဉ်အသွားအလာမှဖွင့်လှစ်
ဗိုလ်ကြီးရေအိုင်ယာဉ်အသွားအလာ Interchange မှဖွင့်လှစ်
D-100 လမ်းမကြီး Hereke Interchange အသွားအလာဦးတည်ချက် Izmit မှပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည်